Automatic Puff achịcha dị iche iche Food Production Line
Ọtụtụ ndị ahịa na-akpọ anyị site na weebụsaịtị anyị iji jụọ ajụjụ banyere ihe nzuzo nke mgbanwe mgbanwe na ịda ụda na nhazi nke puff pastry food production line, yabụ taa onye editọ nke Chenpin ga-akọwa ihe nzuzo nke mgbanwe mgbanwe na dabere na mgbanwe nke puff achịcha achịcha. produc ...
The 19th 2016 International Ime Ngosi Na China
The 19th 2016 International Ime Ngosi Na China ……
Automatic Ciabatta / Baguette bread Production line
Ọtụtụ ndị ahịa na-eji webụsaịtị anyị jụọ ajụjụ maka ihe eji eme ihe maka French Baguette Production, yabụ taa onye editọ nke Chenpin ga-akọwa ihe ndị eji eme ihe na French Baguette. 1. Nhọrọ ntụ ọka: 70% ntụ ọka dị elu + 30% ntụ ọka dị ala, ike ọkọlọtọ ọkọlọtọ ...
Ọtụtụ ndị ahịa na-eji weebụsaịtị anyị ịjụ ajụjụ maka akara ngosi akara 5S na njikwa akara nke akara akara French Baguette. Taa, onye nchịkọta akụkọ nke Shanghai Chenpin ga-akọwa ọkọlọtọ akara akara 5S na njikwa akara akara akara akara French Baguette. 1 Ala nbanye ...
Churros Production akara igwe
Ọtụtụ ndị ahịa na-akpọ anyị site na weebụsaịtị anyị iji jụọ maka nchịkọta mkpokọta nke igwe na-emepụta akara achicha puff, yabụ taa onye editọ nke Chenpin ga-akọwa nchịkọta nchịkọta nke puff pastry production line machine. Nzube: Iji dozie nsogbu ndị achọtara na ...
Banyere mmepụta nguzozi site na akpaaka Tortilla akara
Ọtụtụ ndị ahịa na-eji webụsaịtị anyị akpọ ka ha jụọ maka etu usoro ahịrị tortilla si arụ ọrụ, yabụ taa onye editọ nke Chenpin ga-akọwa nghazi nke usoro mmepụta tortilla. Ihe mere usoro mgbakọ ji nwee ike dị mkpa bụ n'ihi na ọ ghọtara ọrụ ọrụ. Na ...
2016 nke iri na itoolu China International akpọchi ngosi
2016 nke iri na itoolu China International akpọọ nkụ ……
Na-ekwu maka ọdịiche dị n'etiti ụlọ ọrụ igwe ihe oriri China na ụwa
Nyocha gbasara mmepe nke ụlọ ọrụ igwe nri nke mba m n'afọ ndị a Ọdịdị nke ụlọ ọrụ igwe nri nke mba m adịchaghị ogologo, ntọala ahụ esighi ike, ntọala teknụzụ na nyocha sayensị ezughi oke, na mmepe ya pere mpe ...
Kedu ihe kpatara ụlọ ọrụ anyị ga-eji bulie asọmpi ngwaahịa ya
Gini mere anyi ji kwesiri itinye aka na ihe ohuru ohuru n'uwa? Nke a bụ nsogbu ọtụtụ ụlọ ọrụ kwesịrị ichebara echiche. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-etolite etolite na-enyocha ihe ọhụrụ. Dị, ọrụ na n'ire ebe nke ngwaahịa na-ọzọ na ndị ọzọ ne ...
Ofụri Esịt akpaka Pizza igwe emeputa
Igwe Pizza zuru ezu na-akpaghị aka-Chenpin Food Machinery Co., Ltd. A ga-anwale ngwaahịa niile tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji hụ na arụmọrụ nwere ntụkwasị obi. Ndụ ọrụ nkịtị ga - eru afọ iri. Igwe ahụ nwere ihe ọhụụ ọgbara ọhụrụ niile. Igwe mmelite nwere ike na-akpaghị aka na mfe ...
Emeputa akpaka Red bean / Apple pie Production Line
Usoro usoro izugbe nke Red Bean / Apple Pie production line ngwaahịa: igwekota - ngwakọta mgwakota agwa - gbaa ụka - CPE-3100 - nnyefe mgwakota agwa - mgwakota agwa na-akpụzi elu na ala ntụ - na-agagharị na thinning - elu na ala ájá - mgwakota agwa mgwakota agwa na mgwakota agwa shee ...
Automatic Dough Laminator Machine, Akpaka Lacha Paratha Production Line, Croissant Lamination Machine, Dough Laminator Production Line, Dough Laminator Machine, Dough Laminator Line,